Stimol (စတီမိုလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Stimol (စတီမိုလ်)
Stimol (စတီမိုလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Stimol (စတီမိုလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Stimol (စတီမိုလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Stimol ® ကို အားနည်းခြင်းကို ကုသရာတွင် အသုံးပြု သည်။ ဥပမာ-
ဖျားနာပြီးနောက် နလန်ထူစ အချိန်
Stimol (စတီမိုလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Stimol ® ကို အစာဖြင့်သောက်သင့်သည်။ ရေ သို့မဟုတ် အချိုရည်ဖြင့် ရော၍ သောက်သင့်သည်။ ဆေးပတ်သည် ၁၀-၁၂ ရက်ဖြစ်သည်။ ၁-၃ အကြာတွင် နောက် ဆေးတစ်ပတ် ထပ်သောက်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သောက်ပါ။
သင်သည် မောပန်းနွမ်းနယ်နေပြီး Stimol ® ဖြင့် ကုသမှု စတင် လိုပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်း ကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်သင့်သည်။ သူတို့သည် Stimol ® ကို သောက်ရန် ညွှန်ကြားနိုင်ပြီး ကုသမှုကာလအတွင်း သင့်ကို အကြံပေးနိုင်သည်။
နိုင်ငံအများစုတွင် Stimol ® ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် မပါဘဲ ဆေးဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူနိုင်သည်။ သို့သော် အချို့ နိုင်ငံများတွင် Stimol ® ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှသာ ဝယ်ယူနိုင်သည်။
Stimol (စတီမိုလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Stimol ® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Stimol ® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
Stimol ® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Stimol ® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Stimol (စတီမိုလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဤဆေးကို မသုံးမီ သင်သည် အောက်ပါတို့ကို သိထား သင့်သည်။
Stimol ® ကို ဆီးချိုသွေးချိုရှိသော လူနာများတွင် ပေးနိုင်သည်။
တစ်အိတ်တွင် ဆိုဒီယမ် ၃၀ မီလီဂရမ် ပါဝင်သည်။ လူနာသည် ဆားမပါသော စားသောက်မှု ရှိပါက ၎င်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ဆေး၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက ဤ ဆေးကို မသုံးရ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Stimol (စတီမိုလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နှင့် နို့တိုက်စဉ်တွင် Stimol ® သုံးခြင်းသည် ဘေးကင်းသလား သေချာ မသိရှိပါ။ Stimol ® မသောက်မီ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ကောင်းကျိုး နှင့် ဆိုးကျိုးကို ချိန်ညိရန် ဆရာဝန် နှင့် အမြဲ တိုင်ပင်ပါ။
Stimol (စတီမိုလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အစာခြေစနစ်တွင် ကုသမှုအစ၌ အစာအိမ်တွင် ခေတ္တ နာကျင်ခြင်း ရှိနိုင်သည်။ လူတိုင်းတွင် ထိုဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အထက်တွင် ဖော်ပြမထားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး များလည်း ရှိနိုင်သည်။ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများကို စိုးရိမ်ပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါး ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Stimol (စတီမိုလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Stimol ® သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Stimol (စတီမိုလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Stimol ® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုမှု ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Stimol (စတီမိုလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Stimol ® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှု ရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။
သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။ အထူးသဖြင့် အစာခြေလမ်းကြောင်း တွင် ပြည်တည်နာ ဖြစ်ပါက အသိပေးပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Stimol (စတီမိုလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်သူများနှင့် အသက်ကြီးသူများအတွက် ထောက်ခံထားသော ဆေးပမာဏမှာ တစ်နေ့လျှင် သုံးခွက် ဖြစ်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Stimol (စတီမိုလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Stimol ® ကို အသက် ၆နှစ်အထက် ကလေးများတွင် အသုံးပြုသည်။ ထောက်ခံထားသော ပမာဏမှာ တစ်နေ့လျှင် နှစ်ခွက်ဖြစ်သည်။
Stimol (စတီမိုလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Stimol ® ကို အောက်ပါပုံစံ၊ ပြင်းအားများဖြင့် ရနိုင် သည်။
ပျော်ရည်၊ သောက်ဆေး၊ Citrulline Malate ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း
Stimol ® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
Stimol.http://omedicine.info/en/stimol.html. Accessed November 11, 2016
Stimol.http://www.stimol.com/en/how-to-take-stimol.Accessed November 11, 2016
Stimol.http://www.psypharm.com/stimol-citrulline-malate.Accessed November 11, 2016.